Mpikatroka Okrainiana: Ny Fomba Ampiasàny ny Youtube Hanoherana Ny Kolikoly Any Amin’ny Fitsaràna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jona 2015 17:02 GMT
Ny “Open Court” dia tetikasa iray niainga avy eny ifotony natombok'i Stanislav Batryn sy Oleksandr Korol, mpiara-manorina ny ONG Okrainiana mpiaro zon'olombelona “Open Ukraine”, hiadiana amin'ny kolikoly sy ny tsy fahampian'ny mangarahara any amin'ny fitsaràna Okrainiana. Miaraka amin'ny vondrona iray ahitàna ireo mpirotsaka antsitrapo, kasain-dry zareo ny hanatrika ireo fotoam-pitsaràna ao Kiev, handrakitra ny dingana rehetra ho ao anaty lahatsary, handefa azy ireny amin'ny aterineto araka izay tratra, ary hampakatra hitahiry azy ireny ao amin'ny YouTube. Antenain'ireo mpikatroka hoe hiely be ireo lahatsary, indrindra fa ireo raharaha izay tena mahabe resaka, ary avy eo hotsaingohan'ny media sy horesahan'ny fiarahamonim-pirenena. Raha vantany vao manomboka tsapan'ny fitsarana ny fifantohan'ny saina aminy sy ny tsindry avy amin'ny vahoaka, mino izy ireo fa tsy maintsy hampamoahana noho ny laza ratsiny tamin'ireo hetsika tsy mifanaraka amin'ny lalàna nataony ireo mpitsara malaza ratsy ho nanao fanararaotam-pahefana.
Ankehitriny dia ny lahatsary ety anaty aterineto no fitaovana iray fototra ho an'ny “Open Court.” Na mandefa ny lahatsary amin'ny alàlan'ny UStream aza ireo mpikatroka, dia akarin-dry zareo ho ao amin'ny fantsona YouTube ireo lahatsary tahiry misy ny fotoam-pitsaràna, mba hiarovana azy ireny bebe kokoa ho an'ny taranaka ho avy sy ho an'ny fanadihadiana lalindalina kokoa. Aelin-dry zareo amin'ny alàlan'ny vondrona Facebook an'ilay tetikasa sy ao amin'ny tranonkalan'ny “Open Court” ihany koa ny teny mikasika ireo raharaha izay arahan-dry zareo .